Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny tranobe Empire State dia voaravaka amin'ny fialantsasatra
Mirongatra tanteraka ny fifaliana amin'ny fialan-tsasatra ao amin'ny Empire State Building (ESB) satria ny mari-pamantarana malaza dia manambara ireo mpivarotra pop-up eo an-toerana, haingon-trano ambony, ary drafitra ho an'ny fampisehoana mozika mandritra ny faran'ny taona.
Amin'izao fotoana izao, ny varavarankelin'ny Fifth Avenue Lobby ao amin'ny tranobe dia voaravaka seho fialantsasatra izay manasongadina ny tontolon'ny volamena, glitter ary vatomamy ho fanomezam-boninahitra ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny taona. Ny varavarankely mahavariana dia ankasitrahan'ny mari-pamantarana, ny jiron'ny lobby Art Deco, ny fehiloha ary ny hazo krismasy mijoalajoala. Ireo mpitsidika izay mandalo ao amin'ny Lobby Fifth Avenue manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia hotsenain'ny mozika fialantsasatra ataon'ny mpitendry piano matihanina manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva.
"Ny hafaliana amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia azo tsapain-tanana amin'ny lafiny rehetra amin'ny Experience Observatory nohavaozina, manomboka amin'ny haingo manaitra ka hatramin'ny mpivarotra pop-up amin'ny fety," hoy i Jean-Yves Ghazi, filohan'ny Empire State Building Observatory. "Faly izahay miarahaba ireo mpitsidika amin'ny traikefa tena izy sy mahagaga mandritra ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny taona."
Isaky ny faran'ny herinandro ka hatramin'ny faran'ny Novambra, ny Empire State Building dia hivarotra labiera manokana - anisan'izany ny "View From the Top" Hazy IPA manokana amidy ao amin'ny Observatory 86th Floor - miaraka amin'ny Craft+Carry sy Five Boroughs Brewing Co. amin'ny 2 Desambra, DŌ, Cookie Dough Confections, orinasan'ny koba sy cookie azo hanina any NYC, dia handray ny rihana faha-86 ho mpivarotra mipoitra amin'ny volana Desambra. DŌ dia hanolotra fialan-tsasatra enina sy sakafo miaraka amin'ny lohahevitra NYC avy amin'ny sarety manokana amin'ny faha-90 taonan'ny faran'ny herinandro telo voalohany amin'ny volana Desambra.
Ny menorah goavambe dia miarahaba ny vahiny rehefa miditra ao amin'ny Empire State Building Observatory Experience, ary ny fotoana fialan-tsasatra amin'ny zoro avaratra atsinanan'ny 86th Floor Observatory dia ahafahan'ny vahiny maka ny sarin'izy ireo amin'ny fialantsasatra isan-taona miaraka amin'ny lazan'ny NYC tena malaza sy tena izy. Ny haingon-trano dia hitoetra ao amin'ny lobby ary mandritra ny Observatory Experience hatramin'ny 6 janoary.
Ny traikefan'ny Empire State Building Observatory dia nandalo $ 165 tapitrisa, fanavaozana avy any ambony ka hatrany ambany, izay vita tamin'ny Desambra 2019. Ny fanavaozana dia misy fidirana ho an'ny vahiny natokana ho an'ny vahiny, tranom-bakoka mandentika misy fampirantiana nomerika sy tactile, ary ny 102nd Floor Observatory. Ny vahiny dia mandray soa avy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tontolo iainana anatiny (IEQ) - toy ny sivana MERV 13 sy ny bi-polarization mavitrika - ho an'ny fahatokisan'ny vahiny. Ny Observatory 86th Floor dia raikitra miaraka amin'ny jiro fanamafisam-panafana vao tafapetraka amin'ny maripana mba hampafana ny vahiny rehefa mankafy ny ririnina mamirapiratra avy ao afovoan-tanànan'i New York.
Hamirapiratra mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra miaraka amin'ny jiro manokana ho an'ny Thanksgiving, Chanukah, Krismasy ary Taom-baovao ny jiron'ny tilikambo malaza eran'izao tontolo izao.